ဘူလ်ဂေးရီးယား Store မှာ - ပြည်ပမှာပေးပို့များအတွက်အရည်အသွေးဘူဂေးရီးယားထုတ်ကုန်များ၏ရွေးချယ်ရေး - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
bookmark ကိုမှ Ctrl + D ကိုဒီစာမျက်နှာ
ဘူလ်ဂေးရီးယား Store မှာ - ပြည်ပမှာပေးပို့များအတွက်အရည်အသွေးဘူဂေးရီးယားထုတ်ကုန်များ၏ရွေးချယ်ရေး
By အိုင်ဗင် Belchev
ပုံရိပ်တွေ: ဘူလ်ဂေးရီးယား Store က
Georgi Georgiev ပြည်ပမှာအနေဖြင့်အမိန့်ချမှတ်နိုင်အရည်အသွေးကိုဘူဂေးရီးယားအစားအသောက်ထုတ်ကုန်၏ရွေးချယ်ရေးကိုယ်စားပြုသည် BulBox concept ကိုအစပျိုးပေးခဲ့သည်။
"Bul" ဘူလ်ဂေးရီးယားမှလာအဖြစ်ဘူလ်ဂေးရီးယား Store မှာစီမံကိန်းကိုငါ BulBox ခေါ်ထုတ်ကုန် packages များ၏အယူအဆထည့်သွင်း။ ဤအယူအဆအချို့သတ်မှတ်ချက်ပါဝင်ပါသည်သူတို့ကိုအဆိုအရအချို့သောထုတ်ကုန်ကိုရွေးချယ်နေကြသည် / ခူး။
ကျနော်တို့လက်ရှိအများအပြားအဆင်သင့်ရှိ အစားအစာ packages များ BulBox ကျနော်တို့ထုတ်ကုန်များ၏တစ်ဦး Pre-ကိုရွေးချယ်ပေါင်းစပ်အဖြစ်ပူဇော်၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးပြုသောအမှုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ BulBox နှင့်အတူလူရဲ့အိမ်တွေမှာဘူလ်ဂေးရီးယားတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဆောင်ကြဉ်းဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ ဖောက်သည်များအတွက် ပို. ပို. အရေးကြီးသောစံနှုန်းထုတ်ကုန်အရည်အသွေးဒါပေမယ့်လည်းယင်း၏မူရင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူသတင်းအချက်အလက်ကိုသာဖြစ်လာသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၌ငါနှစ်ခုကိုအဓိကဖောက်သည်အုပ်စုများကိုညွှန်ပြတော်မူသော, ဂျာမနီအတွက်အစားအစာဈေးကွက်ထဲမှာသဘာဝသဘောထားကိုသတိပြုမိကြပါပြီ: ပထမဦးဆုံး - လျော့နည်းဖြုန်းဖို့ပိုက်ဆံနဲ့သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ကြဘူးသောသူတို့အားရှိခြင်းကလူ, သူတို့ကအရည်အသွေးနိမ့်ဆီသို့ဦးတည် oriented ကြသည် ထုတ်ကုန် (စသည်တို့ကိုစည်သွတ်ပစ္စည်းများ, ဝက်အူချောင်း,) နှင့်ဒုတိယအုပ်စု - (အရည်အသွေးကိုအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်နှင့်သက်သေမူလအစနှင့်အတူပျားရည်, အခွံမာသီး, အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ, လက်ဖက်ရည်, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, နံ့သာမျိုး, အသား, နို့ထွက်ပစ္စည်းများနှင့်သကြားလုံး) ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘူလ်ဂေးရီးယား Store မှာအထူးမြင့်မားသောပေးဆောင်အတူဖောက်သည်၏ဒုတိယအုပ်စုတစ်စု၏ဆန္ဒကိုနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်အောင်ဖန်တီးနှင့်ပိုပြီးကျန်းမာကိုစားသောသူတို့က, ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးအခေါ်အရည်အသွေးမြင့်ပေါ်သာမှီခိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီအဖြစ်လူမှုရေးတာဝန်တစ်ခုမြင့်မားတဲ့ဒီဂရီရှိခဲ့ပါသည် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကိုလည်းအာရုံစိုက်ထားတဲ့အချက်တစ်ခု။
ဥပမာအားဖြင့်, ငါတို့သည်ငါတို့၏လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်သွားရန်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ငွေပမာဏကိုကယ်တင်တစ်ဦးချင်းစီကိုရောင်း BulBox အထုပ်ထဲကနေ, ကချို့တဲ့ကလေးများအတွက်ချက်ပြုတ်သင်တန်းပုံစံ, afforestation သို့မဟုတ် Bulgarian မိဘမဲ့များအတွက်ပညာသင်ဆုအဘို့ပိုက်ဆံပြုစုပျိုးထောင်များအတွက်တနင်္ဂနွေအတွက်ဖြစ်။
ဘူလ်ဂေးရီးယား Store က၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာဂျာမန်နိုင်ငံသားများ, ဘူလ်ဂေးရီးယားသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပြီးပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ထူးခြားတဲ့ဘူဂေးရီးယားထုတ်ကုန်တွေနဲ့ထိတွေ့ခဲ့ကြသူဂျာမန်တွေရဲ့အထူးသဖြင့်သူတို့အားသန်းပေါင်းများစွာ၏ကျယ်ပြန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရောက်ရှိဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်, ကဘူဂေးရီးယားနဲ့ရေမွှေးအဝါရောင်လက်ဖြစ်, Karlovo မှထရမည် Panagyurishte ကနေပန်းနှင့်အတူ Ravno ဝင်ရိုးစွန်းသို့မဟုတ်ယက်ကော်ဇောထံမှပင်စိမ်းနှင့်အတူဒိန်ခဲ။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်ကျနော်တို့အများဆုံးအဆင့်မြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းစနစ်, ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏လယ်ပြင်ထဲမှာအကောင်းဆုံးဘူဂေးရီးယားစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီများအဖြစ်ဦးဆောင်ဘူဂေးရီးယားအိုင်တီကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးအရေအတွက်ကိုနှင့်အတူအလုပ်သက်ဆိုင်ပါသည်။
ရုသသည် Koleva - အောင်မြင်တဲ့ဝိညာဉ်, jazz နှင့် R'n'B အဆိုတော်
လူငယ်တစ်ဦးဒီဇိုင်နာ Haute couture လောကီသားတို့သည်အဝင်
ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူ, စိတ်ခွန်အားနိုးစပီကာနဲ့ productivity နည်းပြ
ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်, အောင်မြင်မှုနှင့် Burgas ၏မြို့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်များ
ကျောင်းသားများအဘို့အ3စေ့ဆော်ပုံပြင်များ
ဂျယ်ရမီ? အဆိုပါ Indie ရော့ခ်ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်ရည်မှန်းချက်သည့်တစ်ဦးတီးဝိုင်း
သိပ္ပံ BG မဂ္ဂဇင်း
Hayes & Y ကို - လန်ဒန်ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်နာမည်အသစ်
Wall Street ကကူညီပေးဖို့ရော်ဘင် hood ကို
နေ့ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်, ညဉ့်အခါအနုပညာရှင်: လန်ဒန်နှင့် Los Angeles မှာ Mihov ၏အကျင့်
TarnovoRUNS - အားကစားနှင့်ကျန်းမာရေးတို့အတွက်အဖှဲ့အစညျး
2019 များအတွက်တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးက Short အောင်မြင်မှုပုံပြင်များ
အလက်ဇန်းဒါး Verbeek - သမိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အနေအထား
ဘူလ်ဂေးရီးယား Store က, အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ, startup, အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူး | 22-02-2017 | rating:5/ 30
Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Corsican Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Haitian Creole Hausa Hawaiian Hebrew Hindi Hmong Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Irish Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Khmer Korean Kurdish (Kurmanji) Kyrgyz Lao Latin Latvian Lithuanian Luxembourgish Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Maori Marathi Mongolian Myanmar (Burmese) Nepali Norwegian Pashto Persian Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Samoan Scottish Gaelic Serbian Sesotho Shona Sindhi Sinhala Slovak Slovenian Somali Spanish Sudanese Swahili Swedish Tajik Tamil Telugu Thai Turkish Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Welsh Xhosa Yiddish Yoruba Zulu
မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ © 2015-2019 အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း